Elakamuva | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe kunabathile abacabanga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseShayina sewaphela, lokhu kufakazela ukuthi Yena uqedile ukusho wonke amagama okwakufanele awasho, futhi akasenawo amanye amagama amasha ngoba lawa ukuphela kwamagama uNkulunkulu angawasho. Ngaphezu kwalokho, kunabantu abakholelwa ukuthi Izwi Livela Lisenyameni liqukethe wonke amazwi kaNkulunkulu eNkathi Yombuso, futhi ukuthola le ncwadi kufana nokuthola uNkulunkulu uqobo, noma le ncwadi izoholela abantu esikhathini esizayo njengoba kwenza iBhayibheli. Ngethemba ukuthi abakholelwa kule mibono abayona ingcosana, ngoba abantu bathanda ukubekela uNkulunkulu imikhawulo. Nakuba bonke bememezela ukuthi uNkulunkulu unamandla onke futhi uzungelezele konke, imvelo yabantu iselokhu yenza kube lula kubona ukubekela uNkulunkulu umkhawulo endaweni ethile. Ngesikhathi esifanayo lapho umuntu ngamunye ezama ukwazana noNkulunkulu, babuye futhi bamenqabe futhi bambekele umkhawulo.
Umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yombuso usanda kuqala. Wonke amazwi kaNkulunkulu kule ncwadi ayeqondiswe kuphela kulabo ababemlandela ngaleso sikhathi, futhi ayingxenye nje yamazwi kaNkulunkulu esemzimbeni Wakhe womuntu wamanje, futhi awameleli uNkulunkulu kukho konke. Ngaphezu kwalokho, ngeke kushiwo ukuthi ufaka wonke umsebenzi uNkulunkulu azowenza ngesikhathi ekulesi simo somuntu. UNkulunkulu uzoqondisa amazwi Akhe kubantu bezinhlanga nezizinda ezihlukene., futhi uzonqoba bonke abantu futhi aqede nenkathi endala, manje angaqeda kanjani ngemuva kokusho nje amazwi ambalwa kangaka? Ukuthi nje umsebenzi kaNkulunkulu uhlukaniswe ngesikhathi sezinkathi ezahlukene nangezinyathelo ezahlukene. Usebenza ngokulandela icebo Lakhe futhi usho amazwi Akhe ngokulandela amagxathu Akhe. Umuntu angakuqonda kanjani ukuba namandla onke nobuhlakani bukaNkulunkulu? Iqiniso engilichaza ngalokhu yileli: Lokho uNkulunkulu ayikho nanakho kungunaphakande futhi akunawo umkhawulo. UNkulunkulu ungumthombo wempilo nakho konke. UNkulunkulu akanakulinganiswa yinoma yisiphi isidalwa. Okokugcina, kufanele ngikhumbuze wonke umuntu: Ningabekeli uNkulunkulu umkhawulo ngezincwadi, ngamazwi, noma ngamazwi Akhe awaphimisa kudala. Linye kuphela igama elichaza umsebenzi kaNkulunkulu—musha. Akathandi ukuthatha izindlela zakudala noma ukuphinda umsebenzi Wakhe, futhi ngaphezu kwalokho akafuni abantu bamdumise ngokumbekela umkhawulo ngemisebenzi ethile. Ilokhu uNkulunkulu ayikho.
Okwedlule: Isijobelelo: Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe